Mibvunzo neMhinduro – Trading – FX-Consultant
Q: Ndiri ruzivo muzvinashawo. ruzivo chii Ndinofanira tengeserana kushandisa maitiro enyu?
A: ruzivo zvinokosha chete chinodikanwa. Muenderere vanofanira akavhura chati womumwe Currency peya. The zororo chinorondedzerwa muna mukuru mashoko ari User kuti Guide.
Q: I vachadzidza chinhu chitsva?
A: Podràs kugovera dzakamirira mirairo. kunze kwaizvozvo, gadziriro hakurevi dzako, saka unogona kupedza muponeswe nguva achidzidza pamusika uye matauriro ako unyanzvi Forex.
Q: kazhinji sei maitiro ako tuma anonongedzera? I achada kuramba kugara pakombiyuta kumirira chiratidzo?
A: The Hurongwa anopa chiratidzo kamwe pazuva panguva chaiyo. saka, panguva iyoyo zvose zvaunofanira kuita aitarire pachati, chisarudzo uye nzvimbo zvirevo. Mushure maizvozvo, zvinoda zvakawanda dzako, kunze tama murayiro kupinda Break Even.
Q: Ini anakidzwa nzira yako Forex maitiro yave kutumira anonongedzera vangu e-mail. Ko Forex Box kuita chaiwo zvimwechete?
A: Hapana kudikanwa kuti. Kusiyana Forex, ari Forex Box anonongedzera kunotangira panguva chaiyo wainyatsotaura nguva.
Q: Iwe vanoti hurongwa anoshanda 2 mari maviri. Ndinogona kushandisa nayo nevamwe vaviri vaviri?
A: Unogona itongwe, Zvisinei unenge achiburuka gwara kuti isu kare akafukidzwa.
Vamwe yakagadzikana kwazvo zvabuda kwaratidzwa apo hurongwa inoshanda tichinyanyotarisa EURUSD uye USDCHF vaviri vaviri. Zvishoma kugadzikana kunyange vachiri zvinobatsira anonongedzera vakanga akaona USD vaviri vaviri (i.e. GBPUSD, USDJPY, etc.) Hatidi ndikurayire kuedza kushandisa maitiro edu necheni kuti havana USD (i.e. CADCHF, GBPJPY, etc.).
Q: Ndinoda kuchengetedza mari. Ndinogona kutarisira dhisikaundi pamusoro robhoti kana ini vatenge Nomutengesi? uye zvakare, chii dai rwakadini mari yangu kuva?
A: Kana iwe vatenge Nomutengesi yedu pamberi August 1st, muchagamuchira Robot sechipo.
Q: Ndine vashoma Chinyorwa enyika kubva Developers siyana. Vamwe vavo vane zhinji mitsetse siyana, nhanho, Trend, RINOFAMBIRA / yakatesvera panyanga dzacho uye nguva. Tikafunga zvose izvi akajeka zvinhu rinopa zviratidzo panguva zvose kwezvavakaisa goho. Haufungi kuti mukuru uwandu zviratidzi, kuti anonongedzera neyakarurama masvika?
A: Hatidi kufunga kudaro. kazhinji, kana uri kutengeswa zviratidzo zvizhinji. mushure, kushandisa wemishonga kumusoro-dzataurwa zviratidzi, vanobvunza kuti kuwana zviratidzo uri woga. Izvi kwazvo INDICATIVE kunonyatsoratidza kuti yokuvaka chigadzirwa ari simbe uye haana hanya kuti anobvumawo muzvinashawo. Kusiyana, hanya Vashambadziri wedu chii rinotitsaura nevamwe Developers zvose. Tinogara edza kuita zvinhu zvedu zvikuru nyore kunze – saizvozvo, saka nyore, kuti kunyange mutsva muzvinashawo anogona nyore kuti pfungwa kubva kwavari.
Q: Handina kumbobvira akaisa Achimirira Orders. Ndicho chete chinhu inovhika ini kutenga Software yako. How kuoma here?
A: Kana chete chinhu inovhika iwe, usanetseke. Zviri nyore chaizvo. The yose danho nedanho muitiro inorondedzerwa User wacho Guide. Uchadzidza nawo pamusoro 1 Mineti.. zvisinei, kana ukaona zviri zvishoma zvakaoma manually isa mirairo, unogona kugamuchira robhoti yedu pachena uye yaigona kuisa maodha iwe — chinhu kuti aizorega mari iwe sendi.
Kuti nyore: kutenga Nomutengesi pamberi August 1st, 2011, kuedza uye kuratidza pachako chete sei zvinobatsira kuti hurongwa uye mushure August 1st, uchapiwawo robhoti zvachose pachena kwamuri.
Q: Ndezvipi currency maviri kuti Robot kuti kushanda?
A: Ndivo zvakafanana nokuti Nomutengesi – EURUSD uye USDCHF
Q: chipo Your anoti Ndichamuwana zvese: Initial Price, Rega Loss uye Torai Profit. Chinhu bedzi chakashayikwa, umo maonero andaiita kunokosha chaizvo: ndini vachagamuchira nepanomboratidza – umo mirayiridzo ndinofanira kuisa hurongwa hwangu. Ko maitiro kutumira chiratidzo - Ndinofanira kuvhura Chamboko kana Buy Order?
A: Ehe, ehe saizvozvo. Kurongeka Asati yakazaruka, uchava ZVOSE zvakakodzera mashoko. All mamiriro sei kana apo kuvhura mirairo vanorondedzerwa mukuru mashoko uye zviratidzo zviri pachena, pfupi uye nyore kunzwisisa.
Q: Wataura kuti anonongedzera kusvika chaiyo iyo nerimwe zuva I tengeserana. Ndiyo chaiyo iyoyo munyika yose? Vanhu vanogara dzakasiyana nguva dzinodengenyeka uye kunze, nevaichinja zvose zvinoratidza nguva dzakasiyana pamusoro zviteshi dzavo. Ndichakwanisa uchadikamwa zvimwe kuverenga kana kuti nguva yakanakisisa nenzvimbo mirairo yangu?
A: Aihwa, hamungambovi kuita kuti. The Hurongwa vachangoerekana ngaaverenge musiyano wenyu zviteshi 'nguva panyaya GMT uye vachangoerekana zvinoenderana wako chiteshi nguva. Takaona vakaedza kuti hurongwa yedu zvikuru nyore kuti vatengesi zvose. hamungambovi oparadza uropi wako chero unyanzvi mibvunzo.
Q: Ndaishandisa imwe shamisa chakarurama. Pandaiva akariisa chati uye akatarira nhoroondo, zvaiva zvose saka zvakajeka uye zviri nyore kuti ndakanga kushamiswa sei kuuya zvakadaro zvinoshamisa chakarurama yaiwanika mahara? Zvadaro ndakaedza kuchinjanisa nayo inobva ayo anonongedzera, asi nguva dzose izvozvo zvaizochinja navo. Kwekanguvana kare zvakaratidza Open Buy. Ndakaita kuti, asi mangoti ndakazviita, zvingadai nekukurumidza kuratidza Tengesai.
Ko ini nokusangana chaiwo dambudziko chete pamwe zviratidzo zvenyu? Vanogara zvabuda dzavo kupindirana?
A: Chii iwe akatsanangura anonzi Repainting. Zvinosuruvarisa, ruzhinji zviratidzi kutengeswa kuita "repaint". zvisinei, musingadi kuwana chero matambudziko vane zviratidzo zvedu.
Vane chakasimba sedombo!
Q: Achaita chigadzirwa ichi vanewo musi wazvinenge sezvakangoita zvose zvenyu yapfuura zvigadzirwa?
A: Ehe. Mangoti chigadzirwa wako inotiudzawo iwe kuti rapera, tapota inodonha isu tambo uye isu ndichatuma pakarepo uve muganhu Version. Izvi inotidzivirira kubva neapo anonyengera vatengi, uyo kushandisa edu 30-zuva kudzoka maitiro, uye pashure kuwana rizere dzosera, kuramba kushandisa zvinhu zvedu.
Q: Vangani Nhoroondo Ndinogona kushandisa chigadzirwa wako?
A: Unogona kurishandisa pamusoro mumwe (1) kurarama uye 5 Demo nhoroondo. Kana uchida kushandisa chigadzirwa atinoita vakawanda nyaya, tapota taura rutsigiro chikwata chedu uye imi muchava kugamuchira wokuwedzera dhisikaundi yokutenga rimwezve kopi usashandisa.
Q: Izvo Rega Loss uye Tora Profit ndinofanira uchingoti?
A: Tora Profit anogara fixated uye zviri inorondedzerwa User wacho Guide. Stop Loss richatsikwa pfungwa ne chakarurama yedu.
Q: By sei Ndinogona kutarisira kuwedzera dhipoziti yangu munenge mwedzi, kushandisa sofware yako?
A: Zvose zvinoenderana uwandu yako kutanga dhipoziti, sei ngozi wako wokutengesera manyorerwo iri uye, ehe saizvozvo, pamusoro musika pachayo. In aripo musika mamiriro ezvinhu zvakaoma kufungidzira. Zvakasiyana ose zuva Euro mapazi anonzwa zvoupfumi shockwaves uye Unites States riri vava kuda waishandiswa default. Asi, tinonyatsobvuma kuti maitiro edu anogona kukwidza nyaya yako sezvaiitwa 50% pamwedzi kana kuchinjanisa conservatively.
Chikurukuru- nguva dzose kuidza maitiro pamusoro pako Demo nhoroondo yokutanga. Munenge imwe mwedzi kutongwa nguva tinopa, uchaita iumbe pfungwa pamusoro maitiro kuti isimbe uye profitability. zvakafanana, uchagumisa kana hurongwa, shure kwezvose, ndechenyu chinokodzera zvaunoda. mushure, unogona zvakachengeteka kutanga kutengesa pamusoro Live nhoroondo.
Q: Ndeupi nevaichinja ndiwo maitiro ako kupfuura kunoenderana?
A: Unogona kushandisa chero bhuroka pa nokungwara kwako. Chinonyanya kukosha ndechokuti kuva bhuroka kushandiswa MetaTrader4 maitiro, kubva Forex Blue Box unoshanda zvachose mukati kuti nharaunda.
Q: Ndine zvinenge zvose zvezvinhu dzenyu. Vamwe zvigadzirwa vanoshanda rakanaka kwandiri, vamwe havana zvikuru. zvisinei, Ndinoda kukutendai rako kuita dzidzo muitiro yangu. Nemhaka na yako, Handina kuva zvikuru ruzivo, akangwara uye, Chikurukuru, hwakanyarara.
Ndinogona kuverenga pamusoro chero mhando dhisikaundi sezvo vakavimbika mutengi wako?
A: Chekutanga, Ndokutenda zvikuru. We chaizvo kukoshesa kwedu vatengi vakavimbika uye nguva dzose kupa vamwe yakanakisisa rokutenga mikana. Ehe saizvozvo, muwane dhisikaundi. Mashoko uye mamwe mamiriro ezvinhu zvinotsanangurwa kumwewo pa nzvimbo.
Ramba sezvo mutengi yedu uye kutipa mhinduro dzenyu. Zvinotibatsira zvizhinji mune kukura kwedu.
Q: Chii shoma dhipoziti kutanga kushandisa maitiro enyu?
A: A dhipoziti pamusoro $300 kunodiwa kuti vashande mureza mijenya (kubva 0.1). zvisinei, kana dhipoziti yako zvishoma, unogona usilize microlots. Kuti vawane ruzivo pamusoro microlots, tapota taura bhuroka yako.
Q: Iwe akanyora kuti hurongwa raigona kushandiswa pedyo Trailingator. Ko sei? wo, Ndichaita kuwana dhisikaundi kana ini vatenge Trailingator pamwe Forex wako Blue Box?
A: In inofungidzirwa dzedu, nemugwagwa wacho profitability utilizing ari Trailingator kunowedzera munenge 20-25%. zvinotarisirwa, uchaita kuwana dhisikaundi kana iwe kutenga Trailingator.